ဒမ်ဘီလီ အတွက် ညှိမရသေးတဲ့ ဘာဆာ ၊ ဘရာဇီးသားကို ဘရာဇီးသား နဲ့ အစားထိုးမယ့် ဇာဗီ ၊ လင်ဂတ် ကို စိတ်ဝင်စား လာတဲ့ ကွန်တီ တို့နဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ - xyznews.co
ဒမ်ဘီလီ အတွက် ညှိမရသေးတဲ့ ဘာဆာ ၊ ဘရာဇီးသားကို ဘရာဇီးသား နဲ့ အစားထိုးမယ့် ဇာဗီ ၊ လင်ဂတ် ကို စိတ်ဝင်စား လာတဲ့ ကွန်တီ တို့နဲ့ . . . ယနေ့ အတွက် နောက်ဆုံးရ အားကစား သတင်းများ
ဘာစီလိုနာ နဲ့ ဒမ်ဘီလီ တို့ အကြားက စာချုပ်သစ် ကိစ္စ ဟာ ဆက်လက် ညှိနှိုင်း နေဆဲ ဖြစ်ပြီး အဆင်မပြေ ဖြစ်ဖို့ အလားအလာတွေ ရှိနေဆဲလို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
အစောပိုင်းက ဒမ်ဘီလီ ဟာ ဘာစီလိုနာ က မလိုက်လျော် နိုင်တဲ့ လုပ်ခ ပမာဏကို တောင်းဆို ခဲ့တယ်လို့ သတင်းထွက် နေပေမယ့် အခုတကြိမ် မှာတော့ ဒမ်ဘီလီ ရဲ့ အေးဂျင့်က သူ့ရဲ့ ကစားသမားဟာ ငွေအတွက် နဲ့ စာချုပ်သစ် ကိစ္စ ကို ကြန့်ကြာမနေစေ ပါဘူးလို့ ထုတ်ဖော် ပြောဆို လာခဲ့ပြန် ပါတယ် ။
ဘာစီလိုနာ နည်းပြ ဇာဗီ ဟာ အက်စတွန် ဗီလာ အသင်းကို အငှား ပြောင်းရွှေ့ သွားတဲ့ ဖိလစ်ပီ ကော်တင်ဟို ရဲ့ နေရာကို တရုတ် စူပါလိဂ် မှာ ကစားနေတဲ့ ချဲလ်ဆီး ကွင်းလယ်လူဟောင်း အော်စကာ နဲ့ အစားထိုးဖို့ စိတ်ကူး နေတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
အက်စတွန် ဗီလာ က အငှားစာချုပ်ကို ဖျက်သိမ်းပြီး နာပိုလီ ထံ အငှားနဲ့ ထပ်မံ သွားရောက် ကစားခဲ့တဲ့ မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် နောက်ခံလူ တွမ်ဇီဘီ ဟာ စတီဗင် ဂျရတ် ဗီလာ အသင်းနည်းပြ ဖြစ်လာခဲ့မှု ကြောင့် ဗီလာ ကနေ ထွက်ခွာ လာခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ကစားသမားရဲ့ အေးဂျင့်က ထုတ်ဖော် ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် ကွင်းလယ်လူ ဂျက်ဆီ လင်ဂတ် ကို တော့တင်ဟမ် ဟော့စပါး နည်းပြ အန်တိုနီယို ကွန်တီ က စိတ်ဝင်စား လာခဲ့ပြီး အန်ဒွန်ဘီလီ ထွက်ခွာ သွားခဲ့ပါက ခေါ်ယူ သွားဖို့ စိတ်ကူး နေတယ်လို့ သတင်း ထွက်ပေါ်လာခဲ့ ပါတယ် ။
နာပိုလီ ခံစစ်မှူး ကူလီဘာလေ ကတော့ ပြင်သစ် ကနေ သူ့ဆီ ကို ဆက်သွယ် ချိတ်ဆက်မှု ရှိလာ ခဲ့ကြောင်း အတည်ပြု ပြောဆို သွားခဲ့ တာကြောင့် PSG အသင်းနဲ့ သတင်းတွေ ပြန်လည် ပေါ်ထွက် လာခဲ့ရ ပါတယ် ။
ဆန်းဒါးလန်း တိုက်စစ်မှူးဟောင်း ကီဗင် ဖိလစ် က နယူးကာဆယ် အနေနဲ့ လီဗာပူး တိုက်စစ်မှူး အိုရီဂီ ကို ခေါ်ယူ သင့်ကြောင်း တိုက်တွန်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ပြင်သစ် ကလပ် ဘော့ဒိုး အသင်းဟာ ဒီရာသီမှာ ရလဒ်တွေ ကျဆင်း နေပြီး တန်းဆင်း အန္တရာယ် လည်း ရှိလာခဲ့တာကြောင့် အသင်းမှာ ခြေစွမ်းပျောက်ဆုံး နေတဲ့ ခံစစ်မှူး လောရင့် ကိုစီရယ်နီ ကို အသင်းခေါင်းဆောင် အဖြစ်ကနေ ဖယ်ရှားခဲ့ သလို စီနီယာ အသင်း စာရင်းကနေ လည်း လျော့ချ ပစ်ခဲ့တယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
ဘိုင်ယန် မြူးနစ် တောင်ပံ ကစားသမား ကင်းစလေ ကိုးမန်း ကတော့ အသင်းနဲ့ ထပ်မံ စာချုပ် ချုပ်ဆိုဖို့ အလားအလာ ကောင်းနေပြီလို့ သိရ ပါတယ် ။
အီဂျစ်နဲ့ အတူ အာဖရိက နိုင်ငံများ ဖလား ပြိုင်ပွဲ ကစားဖို့ ရောက်ရှိ နေတဲ့ လီဗာပူး တိုက်စစ်မှူး မိုဟာမက် ဆာလာ ကတော့ သူဟာ လီဗာပူး မှာ ဆက်နေ လို ပေမယ့် စာချုပ်သစ် ကိစ္စ ဟာ သူ့ လက်ထဲမှာ မရှိတော့ဘဲ လီဗာပူး အကြီးအကဲတွေ လက်ထဲမှာသာ ရှိနေကြောင်း ပြောဆို သွားခဲ့ သလို လုပ်ခ လစာ ကိုလည်း အလွန် အကျွံ တောင်းဆို မထားကြောင်း ထည့်သွင်း ပြောဆို သွားခဲ့ ပါတယ် ။
ချဲလ်ဆီး ဟာ နောက်ခံလူ အီမာဆင် ပယ်လ်မာရီ ကို ပြန်လည် ခေါ်ယူဖို့ အတွက် ညှိနိုင်း နေပြီး လိုင်ယွန် အသင်းကတော့ အဆိုပြုမှု ၂ ကြိမ်ကို ပယ်ချ ထားပြီး ဖြစ်တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ဘယ်နောက်ခံလူ နေရာအတွက် ချဲလ်ဆီးမှာ ဒုတိယ အစီအစဉ် ရှိနေပေမယ့် အီမာဆင် ကို ဦးစားပေး အစီအစဉ် အဖြစ် သတ်မှတ် ထားတယ်လို့ ကြားသိရ ပါတယ် ။
တူရကီ ကလပ် ကွန်ယာစပေါ် အသင်းမှာ ကစားနေတဲ့ အသက် ၂၇ နှစ် အရွယ် တူရကီ နောက်ခံလူ အာမက် ကာလစ် ဟာ ဒီကနေ့ နံနက်ပိုင်းမှာ ကားမတော်တဆ ဖြစ်ပွားပြီး ကွယ်လွန် သွားခဲ့တယ်လို့ သိရ ပါတယ် ။
ကာလစ် ဟာ သူ့ရဲ့ မင်္ဂလာဆောင် အတွက် ကိစ္စတွေ စီစဉ်ဖို့ အသွားမှာ အခုလို အဖြစ်ဆိုးနဲ့ ကြုံတွေ့ ခဲ့ရတာ လို့လည်း သိရ ပါတယ် ။
Previous Article မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် အသင်းရဲ့ အကြီးမားဆုံး အမှားတစ်ခုကို ထုတ်ပြောလိုက်ပြီး ကစားသမားနှစ်ဦးရဲ့ စိတ်ထားကို ချီးမွမ်းလိုက်တဲ့ ဖာဒီနန်
Next Article မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ အနာဂတ် ခေါင်းဆောင် ဖြစ်လာမဲ့ ကစားသမား အမည်ကို ထုတ်ပြောလိုက်တဲ့ ရန်းဂနစ်